Yaan la isku daalinin HESHIIS dhexmaro Biyamaal iyo Habargidir!! – Puntland Voice
Yaan la isku daalinin HESHIIS dhexmaro Biyamaal iyo Habargidir!!
December 16, 2013 3:33 pm Views: 201
Dowladda Somalia waxay indhaha ka daboolaneysaa xaqiiqada ka jirto gobolka Sh/hoose degmooyinkiisa kala duwan. Dowladda Somalia waa inay ogaataa in shacabka Soomaaliyeed cadaalad ay ka sugayaan. Cadaaladda waa in xaqqa loo hiiliyo sida diinta Islaamka fareyso.
Dagaalada ka dhacay iyo kuwa hadda ka soconayo degmooyin ka tirsan gobolka Sh/hoose ma ahan dagaal beeleed. Dagaal beeleed waxaa la yiraahdaa: Labo beel oo ah dad ood wadaag(bood wadaag) oo isku fahmi waayey qaabka looga faa’ideysan lahaa dhul ay wadaagaan.Biyamaal wuxuu dagaa degmooyin ka mid ah Sh/hoose iyo Jubbooyinka. Habargidir waxay degtaa qaybo ka mid gobolada Galgaduud iyo Mudug.
Waxaa in badan aan isha ku haayey oo aan la socday heshiisyo ay garwadeen ka ahayd dowladda Somalia kuwaasi oo la dhexdhigayey Biyamaal iyo Habargidir, dhammaan heshiisyadaas wey shaqeyn waayeen, waayo baadhil ayey ahaayeen. Heshiis wuxuu dhexmari karaa dad dhul wadaago. Biyamaal iyo Habargidir ma jirto hal tuulo/degmo/gobol oo ay wadaagaan.
Dowladda Somalia waa ineysan xaqiiqada ka leex-leexanin haddii loo baahan yahay in la helo qaran Soomaaliyeed oo cagahiisa ku taagan. Caqliga bani aadamka ayaa diidayo in dowladda ay ku hadaaqdo ama dadka ay ku madadaaliso hadalada “Biyamaal iyo Habargidir ayaan heshiisiineynaa!!”. Biyamaal iyo Habargidir ma wadaagaan dhul, Habrigidir dhulka Somalia ay ka degto dadka Soomaalida oo ayaa yaqaano, waa degmooyin ka tirsan Galgaduud iyo Mudug. Biyamaal isagana dhulka uu ka dego Somalia waxa yaqaano dadka Soomaalida oo dhan, Biyamaal wuxuu degaa degmooyin ka tirsan Sh/hoose iyo Jubbooyinka. Su’aasha waxay tahay:
Maxaa laga heshiisiinayaa beelahaan oo ay wadaagaan? Beel walbo deegaankeeda miyaanay u tilmaami Karin dowladda Somalia? Mise dowladda ayaaba qorsheysay in dagaal lagu qaado masaakiinta Sh/hoose? Sh/hoose beelo la heshiisiinayo ma jiraan ee waxaan u sheegayaa dowladda in Habargidir u tilmaanto deegaankeeda si colaadda dalka Somalia loo soo afjaro.
Habdhaqanka Dowladda Somalia iyo rajada wanaagsan ee ay u muujineyso beesha caalamka waa wax aad u kala fog. Haddii aad Madaxweyne dalka Somalia oo dahn ka tahay maskaxdaada waa inaysan ku koobnaan maslaxad beel ee waa inaad noqotaa qof Qaran. Nasiib darro madaxweynaha Somalia wuxuu u muuqdaa mid aan cadaaladda rabin, Soomaalida oo dhan wey u jeedaa dagaalka xaqdarada ah ee beesha Biyamaal lagu qaaday ee dhowr jeer fashilmay si dhulkooda looga barakiciyo.
Waxaa is weydiin mudan: Ma jiraa Shacab Habargidir ah oo deggan Sh/hoose? Runtii Shacab Habargidir ah oo Sh/hoose ku nool ma jiraan, waxaa jiro ciidamo lagu sheegay Milateri oo Xamar iyo meelo fog-fog laga diray oo dhibaato ku haayo shacabka beeraleyda ah.
Rasaasta ay ridayaan ciidamada Milateriga uu mas’uulka ka yahay Xasan Sheekh ee isugu jirto Zuu ama Artillery(37), Dhashiike, PKM IWM waa mid ku dhaceyso dad maati ah oo xoolo dhaqato ah, beeraley ah.
Habargidir haddii ay xoog ku qabsatay shan(5) degmo oo gobolka Banadir ka tirsan oo ay haatan gudoomiye ka tahay, aawey dadkii reer Banaadir? . Habargidir waxay isku dayeysaa in dadka dhulkooda ku maamusho, taasina waxaa ka dhiidhinayo dadka u dhashay deegaanadaas.
1- Beesha Biyamaal ee dulmiga lagu hayo waxaan ugu baaqayaa inay u turaan shacabkooda lagu dul dagaalamayo waayo magaalooyinka lagu dagaalamyo iyo miyiga waxaa degan Biyamaal, rasaastii la rido waxay ku dhaceysaa qof Biyamaal ah ama hanta Biyamaal leeyahay.
2- Beesha Habargidir ee aan shacab ka joogin oo ciidamadooda dadka maatida ah rasaasta ku dhex ridaayo waxaan ugu baaqayaa inaysan Habargidir u abuurin mashaakil, waayo waxaa dhib noqon doonto in qof Habargidir ah uu xataa ku dhex safro deegaano ka tirsan Sh/hoose.
3- Dowladda Somalia ayay ka go’daa talada dalka maanta, haddii dowladda u hiilin weyso xaqqa oo ay taageerto baadhilka waxaa meesha ka sii socon doono dhiigga daadanayo oo aan dhamaad lahayn.
Dadka Soomaaliyeed waxay ka sugayaan dowladda Somalia in Habargidir u tilmaanto deegaanadeeda oo maleeshiyaadkooda kala baxaan Sh/hoose.